Nhau - Musiyano uripo pakati pe2.4GHz ne5GHz
Musiyano uripo pakati pe2.4GHz ne5GHz
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kujekesa kuti 5G kutaurirana hakuna kufanana ne5Ghz Wi-Fi yatichataura nezvayo nhasi. Kutaurirana kwe5G chaiko iko kupfupiswa kwe5th Generation nhare mbozha, iyo inowanzoreva kune nharembozha yekutaurirana tekinoroji. Uye yedu 5G pano inoreva iyo 5GHz mune iyo WiFi standard, iyo inoreva kune iyo WiFi chiratidzo iyo inoshandisa iyo 5GHz frequency band kuendesa data.
Anenge ese maWi-Fi zvishandiso pamusika izvozvi zvinotsigira 2.4 GHz, uye zvirinani zvishandiso zvinogona kutsigira zvese zviri zviviri, zvinoti 2.4 GHz uye 5 GHz. Aya ma Broadband routers anonzi maviri-bhendi waya ma routers.
Ngatitaurei nezve 2.4GHz uye 5GHz mune yeWi-Fi network pazasi.
Kuvandudzwa kwetekinoroji yeWi-Fi ine nhoroondo yemakore makumi maviri, kubva kuchizvarwa chekutanga che802.11b kusvika 802.11g, 802.11a, 802.11n, uye kune ikozvino 802.11ax (WiFi6).
WiFi isina waya ingori chidimbu. Iwo ari chaiwo subset yeiyo 802.11 isina waya yemunharaunda netiweki standard. Kubva payakazvarwa muna 1997, anopfuura makumi matatu neshanu shanduro dzemhando dzakasiyana dzakagadzirwa. Pakati pavo, 802.11a / b / g / n / ac yakagadziridzwa mamwe matanhatu vhezheni dzakakura.
IEEE 802.11a muyero wakadzokororwa wepakutanga 802.11 standard uye wakabvumidzwa muna 1999. Iyo 802.11a standard inoshandisa imwecheteyo core protocol seyakajairwa yekutanga. Iyo yekushandisa frequency ndeye5GHz, 52 orthogonal frequency kupatsanura multiplexing subcarriers anoshandiswa, uye iyo yakakwira mbichana data yekuparadzira mwero ndeye 54Mb / s, iyo inozadzikisa iyo yepakati kuburitsa yeiyo chaiyo network. (20Mb / s) zvinodiwa.
Nekuda kweiyo inowedzera yakazara 2.4G frequency band, iko kushandiswa kwe5G frequency band ndiko kusimudzira kwakakosha kwe802.11a. Zvisinei, zvinounzawo matambudziko. Nharaunda yekufambisa haina kunaka se802.11b / g; mune dzidziso, 5G zviratidzo zviri nyore kuvharirwa uye kunyudzwa nemadziro, saka kufukidzwa kwe802.11a hakuna kunaka se801.11b. 802.11a inogona zvakare kupindirwa, asi nekuda kwekuti hapana akawanda masystem ekupindira padhuze, 802.11a kazhinji ine nani kupinda.
IEEE 802.11b chiyero chevasina waya yemunharaunda nharaunda. Iyo inotakura frequency ndeye 2.4GHz, iyo inogona kupa akawanda kutapisa kumhanya kwe1, 2, 5.5 uye 11Mbit / s. Iko dzimwe nguva kunonyorwa zvisiri izvo seWi-Fi. Muchokwadi, Wi-Fi chiratidzo cheiyo Wi-Fi Alliance. Ichi chiratidzo chinovimbisa chete kuti zvinhu zvinoshandisa chiratidzo zvinogona kushandira pamwe, uye hazvinei nechekuita pachayo. Mune iyo 2.4-GHz ISM frequency bhendi, kune akazara gumi nematanhatu ane bandwidth ye22MHz, ayo ari gumi nemaviri anopindirana frequency bhendi. Iye anotsiva IEEE 802.11b ndiIEEE 802.11g.
IEEE 802.11g yakapasiswa muna Chikunguru 2003. Iyo frequency yeanotakura ndi2.4GHz (yakafanana ne802.11b), huwandu hwemakiromita gumi nemana emabhandi, iyo yekumhanyisa yekumhanyisa mhanyisa iri 54Mbit / s, uye mambure ekumhanyisa kumhanya angangoita 24.7Mbit / s (zvakafanana ne802.11a). 802.11g zvishandiso zviri pasi zvinoenderana ne802.11b.
Gare gare, vamwe vanogadzira rauta vasina waya vakagadzira zviyero zvitsva zvinoenderana neiyo IEEE 802.11g standard mukupindura zvinodiwa pamusika, uye yakawedzera theoretical transmission kumhanyisa kusvika 108Mbit / s kana 125Mbit / s.
IEEE 802.11n chiyero chakagadzirwa pahwaro hwa802.11-2007 neboka idzva rinoshanda rakaumbwa neIEEE muna Ndira 2004 uye rakatenderwa zviri pamutemo munaGunyana 2009. Iyo mwero inowedzera rutsigiro rweMIMO, ichibvumira bandwidth isina waya ye40MHz, uye dzidziso. kunonyanyisa hutachiona kumhanya ndeye 600Mbit / s. Panguva imwecheteyo, nekushandisa iyo-yenguva-nguva block kodhi yakatsanangurwa naAlamouti, muyero unowedzera huwandu hwekutapurirana kwedata.
IEEE 802.11ac iri kusimukira 802.11 isina waya komputa network kutaurirana standard, iyo inoshandisa iyo 6GHz frequency band (inozivikanwawo se5GHz frequency band) yeasina waya enzvimbo yenzvimbo network (WLAN) kutaurirana. Mune dzidziso, inogona kupa ingangoita 1 Gigabit pasekondi bandwidth kune akawanda-chiteshi waya emunharaunda nharaunda network (WLAN) kutaurirana, kana angangoita 500 megabits pasekondi (500 Mbit / s) yeiyo imwechete yekubatanidza yekuparadzira bandwidth.
Inotora uye inowedzera iyo mweya interface pfungwa yakatorwa kubva ku802.11n, inosanganisira: yakafara RF bandwidth (inosvika 160 MHz), yakawanda MIMO nzvimbo yenzizi (yakawedzera kusvika 8), MU-MIMO, Uye yakakwira-density demodulation (modulation, inosvika ku256QAM ). Iye anogona kuve anotsiva IEEE 802.11n.
Muna 2017, Broadcom yakatungamira mukutangisa iyo 802.11ax isina waya chip. Nekuti iyo yapfuura 802.11ad yaive kunyanya mune 60GHZ frequency band, kunyangwe iyo yekumhanyisa kumhanyisa yakawedzerwa, kufukidzwa kwayo kwaive kushoma, uye ikave tekinoroji inoshanda iyo yakabatsira 802.11ac. Sekureva kweprojekiti yeEEEE yepamutemo, chizvarwa chechitanhatu Wi-Fi iyo inowana nhaka 802.11ac i802.11ax, uye inotsigira yekugovana mudziyo yakatangwa kubva 2018.
Chizvarwa chekutanga chemuchina wekutepfenyura weiyo IEEE 802.11 wakaberekwa muna 1997, saka michina yakawanda yemagetsi inowanzo shandisa 2.4GHz isina waya frequency, senge maovheni ewa microwave, zvigadzirwa zveBluetooth, nezvimwewo, zvinokanganisa zvakanyanya ne2.4GHz Wi-FI, saka Iyo chiratidzo inokanganiswa kune imwe nhanho, senge mugwagwa une ngoro dzinodhonzwa nemabhiza, mabhasikoro uye mota dzinomhanya panguva imwe chete, uye kumhanya kwekumhanya kwemotokari kunoitika zvakasikwa.
Iyo 5GHz WiFi inoshandisa yakakwira frequency bhenji kuunza mashoma chiteshi kuzara. Inoshandisa migero makumi maviri neshanu uye haina kupindirana. Inofananidzwa nematanho matatu e2.4GHz, inoderedza zvakanyanya kuzara kwemasaini. Saka chiyero chekutapurirana che5GHz i5GHz nekukurumidza kupfuura 2.4GHz.
Iyo 5GHz Wi-Fi frequency bhendi ichishandisa yechishanu-chizvarwa 802.11ac protocol inogona kusvika kukumhanyisa kumhanya kwe433Mbps pasi pechikwata che80MHz, uye kumhanyisa kumhanya kwe866Mbps pasi pechikwata che160MHz, zvichienzaniswa ne2.4GHz chiyero chekutapudza chepamusoro mwero we300Mbps wakagadziridzwa zvakanyanya.
5GHz Isina kuvakwa
Zvisinei, 5GHz Wi-Fi inewo zvikanganiso. Kukanganisa kwaro kuri munharaunda yekufambisa uye kugona kuyambuka zvipingamupinyi.
Nekuti Wi-Fi inesimba remagetsi remagetsi, nzira yayo huru yekuparadzira yakatwasuka yekuparadzira mutsara. Kana ikasangana nezvipingamupinyi, inozoburitsa kupinda mukati, kuratidzira, kudzikisira uye zvimwe zvinoitika. Pakati pavo, kupinda mukati ndiko kwakanyanya, uye chikamu chidiki chechiratidzo chichaitika. Kufungisisa uye kusiyanisa. Hunhu hwemafungu eredhiyo ndewekuti kudzikisira kuwanda, kureba kwewavelength, kuderera kwekurasikirwa panguva yekupararira, kuwanda kwekuvhara, uye zviri nyore kupfuura zvipingamupinyi; iyo yakakwira iyo frequency, iyo diki yekuvhara uye iyo yakaoma zvakanyanya. Enda kumativi zvipingamupinyi.
Naizvozvo, iyo 5G chiratidzo ine yakakwira frequency uye ipfupi wavelength ine nzvimbo diki yekuvhara, uye kugona kupfuura nemumipingo hakuna kunaka se2.4GHz.
Panyaya yekufambisa nhambwe, 2.4GHz Wi-Fi inogona kusvika pakakwirira kufukidzwa kwemamita makumi manomwe mukati meimba, uye kufukidzwa kukuru kwemamita mazana maviri nemakumi maviri kunze. Uye 5GHz Wi-Fi inogona chete kusvika kune yakanyanya kufukidzwa yemamita makumi matatu nemashanu mumba.
Mufananidzo uri pazasi unoratidza kuenzaniswa kweEkahau Site Survey kufukidzwa pakati peiyo 2.4 GHz uye 5 GHz mafirita emabhendi eakagadzirwa dhizaini. Iyo yakasviba yakasvibirira yemaviri simulations inomiririra kumhanya kwe150 Mbps. Iyo tsvuku mune iyo 2.4 GHz simulation inoratidza kumhanya kwe1 Mbps, uye iyo tsvuku mu5 GHz inoratidza kumhanya kwe6 Mbps. Sezvauri kuona, kufukidzwa kwe2.4 GHz APs kuri kukura zvishoma, asi kumhanya kumucheto kweiyo 5 GHz kufefetera kuri kukurumidza.
5 GHz uye 2.4 GHz akasiyana mafrifits, imwe neimwe ine zvakanakira netiweki dzeWi-Fi, uye mabhenefiti aya anoenderana nekuti iwe unoronga sei network - kunyanya kana uchifunga renji nezvipingamupinyi (madziro, nezvimwewo) izvo zvinoda chiratidzo kuvhara Zvakanyanya here?
Kana iwe uchida kufukidza yakakura nzvimbo kana uine yakakwirira kupinda mukati memadziro, 2.4 GHz ichave iri nani. Zvisinei, pasina izvi zvisingakwanisi, 5 GHz ndiyo inokurumidza kusarudza. Kana isu tikabatanidza zvakanakira nekusagadzikana kweaya maviri mafirita bhendi uye toasanganisa iwo kuita rimwe, nekushandisa mbiri-bhendi yekuwana mapoinzi mune isina waya kutumirwa, tinogona kupeta isina waya bandwidth, kudzikisira kukanganisa kwekukanganisa, uye kunakirwa kwese-kwese A nani Wi -Fi network.
Shenzhen HUANET Technology CO., Ltd inopa ese marudzi e2.4 GHz & 5GHz ONU.Tinopawo Huawei EG8145V5 uye ZTE F670L mbiri bhendi ONT. Isu tinofunga pano panofanirwa kuve nemhando imwe AC wifi ONT inogona kusangana nechikumbiro chako.
Xfp Transceiver, Optical Fiber Module, Sfp C ++, External Modulation Transmitter, Huawei Qsfp +, Huawei Olt Mutengo,